Van Peirse oo Badbaadiyay Man Utd Gacantana ka Galiyay 3 dhibcood ee Man City
Mogadishu Isniin 10 December 2012 SMC
Ciyaar adag oo si weyn loo wada sugayay ayaa shalay dhexmartay Kooxaha Man city vs Man utd waxaan kulnkaan oo ka dhacay Garoonka Man city,durbadiiba Jaanta isla helay Kooxda Man Utd waxana Goolkii 1 ku Hormariyay 10 Rooney oo kubad Taraarax ah dhinac ka galiyay Shabaqa Man Ciy.
Kooxda Man city ayaa Markaasi bilowday inay huiradda ka kacaan waxana ay la beegsadeen Goolka Man utd Fursado dhowr ah oo natiijo la aan ku dhamaaday,Weeraryahan Rooneey ayaa Daqiiqadii 29 u Labeeyay Man City waxaana qeybtii Hore lagu kala nastay 2-0 looga horeeyo Kooxda Man city oo isku dhex yaacsaneyd qeybtii Hore.
Marki la isagu soo laabtay qeybtii danbe Ciyaartu waa kulullaatay waxana Kooxda Man city ay bilowday dar dar Xoogan Daqiiqadii 60 waxaa u dhaliyay Goolkeedii 1 Yaya Toure kaaoso ka dhigay Ciyaarta 1-2.
Daqiiqadii 78 waxaa ka luniyay Goolkii Barbaraha D.Zilva Ka dib Markii Goolhaye Di GEA isku dhigay kubad loo qaatay inay dfhaltay oo ka soo baxday Lugta C.Zilva, sidoo kale Kooxda Man utd waxa Birta Goolka Man city Kubad Xoogan kaga dhawaajiyay 20 Van Persie.
Kooxda Man city waxa ay heleen Goolkii 2 Daqiiqadii 86 waxaana Laad xoogan ku Malaasay shabaqa Man utd Difaacooda reer Argentina Ciyaaryahan Zabaleta Kaasoo niyada u soo cleiyay Tababare Mancini Macalinka Man city.
daqiqiadihii dheeraadka ee lagud aray Ciyaarta ayey heleen Goolkii 3 ee Guusha Kooxda man utd waxaana Goolkaasi Laad xor ah ku dhaliyay Van Peirse oo dhinac ka dhigay bKubada shabaqa Man city waxaana Ciyaartii ay ku dhamaatay Man utd oo 3-2 isaga reebtay Kooxdii ku soo xigtay xaga dhibcaha Horyaalka Ingiriiska 2012-2013 ee Man city.
Kalainta 1 waxaa wali kujira oo laga furfuri la yahay Kooxda Man utd oo leh 39 dhibcood.Man City 33 dhibcood,Chelsea 29 dhibcood.
N.B Guuldaradaan lagu karbaashay Man city waa tii ugu Horeysay ee ay kala kulanto Horyaalka Ingiriiska 2012-2013